Rakhiyeyaasha Kumbiyuutarka Gawaarida Gawaarida ah ee Alaabada Kexeeya ee Soosaara Mishiinka iyo Warshad | YiZheng
Nooca Crawler Guudmarka Mashiinka Isku-darka Wasakhda Qashinka
Gawaarida Gawaarida Gawaarida Gawaarida Gawaarida ah waa mashiinka xirfada u leh bacriminta digada iyo bacriminta qalabka kale ee dabiiciga ah. Waxay qaadataa nidaam casri ah oo qalliinka ku shaqeeya, hawlgalka isteerinka awoodda isteerinka iyo farsamaynta nooca guurguuraha ah.
Nooca Crawler Nooca Isku-darka Wasakhda Isukeenista Mashiinka waxaa iska leh habka khamiirinta dhulka, taas oo ah qaabka ugu dhaqaalaha badan ee lagu badbaadiyo carrada iyo ilaha aadanaha xilligan. Maaddadu waxay u baahan tahay in lagu tuuro xarig, ka dibna maaddada ayaa la kiciyaa oo la jajabiyaa xilliyada caadiga ah mashiinka leexinta, iyo kala-baxa walxaha dabiiciga ah wuxuu ku jiri doonaa xaaladaha aerobic. Waxay sidoo kale leedahay shaqo jaban, oo si weyn u badbaadisa waqtiga iyo xoogga shaqaalaha, taasoo ka dhigaysa wax-soo-saarka wax-soo-saarka iyo tayada wax soo saarka ee warshadda bacriminta dabiiciga ah inay si weyn u soo hagaagtay, kharashkuna si weyn hoos ugu dhacay.
Muxuu yahay Mashiinka Crawler Nooca Isku-darka Wasakhda Wasakhda ah ee loo adeegsado?
Nooca Crawler Nooca Isku-darka Wasakhda Isukeenista Mashiinka waa qalab aad muhiim ugu ah wax soo saarka bacriminta dabiiciga ah. Waxay qaadataa naqshad gudbinta raadraaca, oo uu ku shaqeyn karo hal qof. Hawlgalka waxaa lagu dhammaystiri karaa oo keliya meelaha furan, laakiin sidoo kale aqoon isweydaarsiyo ama lagu koriyo. MarkiiNooca Crawler Nooca Isku-darka Wasakhda Isukeenista Mashiinka shuqullada, dhoobada, digada xayawaanka ee dhegta ah iyo qalabka kale ayaa si fiican loogu kicin karaa fungus iyo budada cawska, oo abuuraya jawi aerobic wanaagsan oo ku saabsan halsano ee qalabka. Kaliya maaha inay ka khafiifiso nooca jeexdin qoto dheer, laakiin sidoo kale waxay si wax ku ool ah uga hortagtaa soo saarista gaasaska waxyeellada leh iyo urta leh sida hydrogen sulfide, gaaska amine iyo indole inta lagu jiro halsano, taas oo waafaqsan shuruudaha ilaalinta deegaanka.
Faa'iidooyinka Nooca Crawler ee Composting Turner Machine
Mid ka mid ah guulaha farsamo ee Nooca Crawler Nooca Isku-darka Wasakhda Isukeenista Mashiinka waa in lagu daro howlaha burburin ee maaddooyinka marxaladda dambe ee halsano. Dhaqdhaqaaqa iyo leexashada joogtada ah ee qalabka, usha mindi waxay si wax ku ool ah u burburin kartaa buruqda ku samaysanta geeddi socodka halsano ee alaabta ceeriin. Looma baahna jajabiyaha dheeraadka ah ee wax soo saarka, taas oo si weyn u wanaajinaysa waxtarka shaqada isla markaana yareyneysa kharashyada.
(1) Awooddu waa 38-55KW matoor naafto ah oo biyo qaboojiye toosan ah, kaasoo leh awood ku filan, waxtarka sare iyo isticmaalka shidaalka oo hooseeya.
(2) Badeecadani waa la rogay oo lagu kala soocay bilow jilicsan. (Badeecadaha kale ee gudaha ka jira ee isku nooc ah waxay u adeegsadaan bir birta xajinta adag ee birta, taas oo dhaawac culus u leh silsiladda, dhalidda iyo usheeda dhexe).
(3) Dhamaan hawlgalku waa mid jajaban oo fudud. Ku hagaaji masaafada u dhexeysa usheeda dhexe ee mindi iyo dhulka adiga oo adeegsanaya nidaamka haydiyaha.
(4) Lagu rakibay saxanka riixa hore ee Haydarooliga, sidaa darteed looma baahna in gacanta lagu qaato gebi ahaanba dusha.
(5) Qaboojiye ikhtiyaari ah.
(6) Mashiinka bacriminta oo leh in kabadan 120 faras ayaa loo habeeyay iyadoo loo eegayo shuruudaha isticmaalaha.
Nooca Crawler Nooca Isku-darka Wasakhda Wasakhda Muuqaalka Muuqaalka Muuqaalka
Xulashada Nooca Crawler Composting Turner Machine Model
2400 r / daqiiqo
Xawaaraha awoodda lagu qiimeeyay
2400 leexasho / dhibic
600 ~ 800 laba jibbaaran / H
1000 ~ 1200 laba jibbaaran / H
1000 ~ 1500 laba jibbaaran / H
Hore: Saxan silsilad Compost Turning
Xiga: Qaadista Haydarooliga Qaadista Turner